Nitety Firenena Sivy izy Handosirana Ady—Vao 12 Taona Monja Izy Tamin’izany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2015 3:45 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Gulwari Passarlay tao Londona. Sary: Leo Hornak. Fanomezandàlan'ny PRI
Ny 14 Oktobra 2015 no nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org ity lahatsoratra sy tatitra anaty onjampeo nataon'i Shirin Jaafari ho an'ny The World ity, ary naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanekena hifampizara votoaty.
Talohan'ny fananiham-bohitra nataon'ny Amerikana tao amin'ny fireneny, mpiandry ondry i Gulwari Passarlay, nandany ny ankamaroan'ny fotoam-pahazazàny niaraka tamin'ireo raibe sy renibeny tany an-tendrombohitr'i Afghanistan.
Saingy avy eo novain'ny fananiham-bohitry ny Amerikana ny zavatra rehetra.
“Feom-basy sy tafondro ary fiaramanidina no tena zavatra henoko mandritry ny alina,” hoy ny tsiaron'i Gulwari.
Tao anatin'ny fifandonana iray teo amin'ny tafika Amerikana sy ny tafika Afgana notohanan'ny OTAN no maty ny rain'i Gulwari sy olona dimy hafa tamin'ny fianakaviany. Taorian'izany, tonga nitady an'i Gulwari sy ny rahalahiny ireo Taliban. Naniry ny hampiditra azy tao anatiny ry zareo mba hahafahany manao valifaty.
“Nokatsahan-dry zareo fatratra ny hanatevenanay ny laharan-dry zareo ary norahonany izahay,” hoy izy.
Natahotra ny amin'ireo zanany lahy ny renin'i Gulwari. Niriany havoaka an'i Afghanistan avy hatrany ry zareo. Ny handefa azy ireo any Eoropa no tetika.
Araka izany dia nandao an'i Afghanistan ho any Pakistàan ireto mpirahalahy. Saingy vantany vao tonga tany, tafasaraka izy roa. Avy eo i Gulwari, 12 tamin'izany, nanohy irery ny diany. Nitondra azy nitety firenena sivy samihafa ny dia lavitr'ezaka sarotra nataony, isan'ireny i Iràna, Tiorkia, Gresy sy Bolgaria.
“Nampiasa ny karazana fitaterana rehetra nisy aho…tongotra, fiaramanidina, fiara, izay iantsoanareo azy,” hoy izy. “Nolalovako ny helo. Hitako maso ny fahafatesana,” hoy izy.
Nandany fotoana ela tany am-ponjan'i Tiorkia i Gulwari. Naverina tany Iràna, toerana niaingàny ho any Tiorkia. Nisedra hanoanana nandritry ny andro maro ary nivenjivenjy nandritry ny andro maro. “Auto-stop” no nataony niampitàna ny sisintany ary farany tonga tany Angletera — firenena faha-10 ho azy — niafina tanaty fiara be fitaterana akondro.
Tsy mora ny zavatra natrehan'i Gulwari rehefa tonga tany Angletera nony farany. “Ny dia fotsiny aloha dia efa henjana saingy mbola sarotra noho ny dia ny fisianao tao Angletera,” hoy izy.
Izany dia satria tsy maintsy nanaporofo ny taonany izy, ny zom-pireneny ary ny maha-mpitsoa-ponenana azy.
“Dimy taona no laniko hanaporofoana fa tena mpitsoa-ponenana tsy misy fangarony aho ary nila fiarovana,” hoy izy nanazava.
Saingy tsy olona mora miraviravy tànana i Gulwari. Noraisinà fianakaviana mpanangan-jaza izy, nandeha an-tsekoly ary haingana tamin'ny fianarana ny teny Anglisy. 21 taona izy izao, hanomboka ny fianarany ny politika sy ny filaozofia izy ato ho ato, ao amin'ny Anjerimanontolon'i Manchester. Maniry izy mba ho afaka hiverina any Afghanistana indray andro any ary hanampy ireo tra-pahasahiranana.
“Fanantenako ny mba hanao izay hahazoan'ireo olona tahaka ahy antoka fa tsy voatery izy handao an'i Afghanistana ary ireo reny tsy handefa ny zanany handositra ho any an-toerana hafa,” hoy izy .
Nanoratra boky iray momba ny diany i Gulwari Passarlay, nantsoiny hoe “Ilay lanitra matroka: Dia Fandosiran'ny Zazalahy Afghana iray Mba Hanana Fiainana Iray Vaovao Tany Angletera.”